Ndinoziva sei kuti processor yangu inotsigira makumi matanhatu nemasere? | Kubva kuLinux
Ndinoziva sei kuti processor yangu inotsigira makumi matanhatu nemasere?
Iyi inyaya yaunza nyonganiso yakawanda pakati pevashandisi. Kunyangwe pavanofunga kuti vanoziva mhinduro, kazhinji vanokanganisa.
Zvaiita senge zvine hungwaru kuzviunza izvozvi mukutarisa kuri kuuya Ubuntu 10.04 uye Fedora 13 kuburitswa. Sezvo isu tese tichiziva, akawanda maLinux anogovera ane shanduro dzakagadziridzwa makumi matanhatu neshanu processor. Apa ndipo panomuka dambudziko redu: Ko muchina wangu unotsigira 64 bit? Ini ndinogona kurodha pasi iyo makumi matatu nematatu vhezheni kuitira kana? Uye iyo mibvunzo inoenderera ...
Tisati tatanga kufumura zvakavanzika izvi, ngatijekesei kuti tiite bvunzo dzatichaita pano zvakafanira kuti utove neLinux (chero distro) yakaiswa pamushini uyo. Zvikasadaro, iwe unogona kumhanya iyi mirairo nekutora Linux kubva kune LiveCD.
Ngatitangei nekusiyanisa pakati pekuziva izvo chako chaicho hardware chinotsigira uye rudzii rwe kernel urikumhanya pane iyo Hardware.
Kana iwe uchida kuziva kana iwe Hardware inotsigira makumi matanhatu nemasere, vhura terminal uye unomhanya:
grep mireza / proc / cpuinfo
Kana lm ikaonekwa mune mhedzisiro, saka inotsigira makumi matanhatu neshanu; kana Yakadzivirirwa Mode ikaonekwa, inotsigira makumi matatu nematatu; kana Real Mode ikaonekwa, inotsigira gumi nematanhatu.
Kana iwe uchida kuziva kana iwe yazvino tsanga inotsigira makumi matanhatu nemasere, vhura terminal uye unomhanya:
Kana "x86_64 GNU / Linux" ikaonekwa mumhedzisiro, zvinoratidza kuti urikumhanya 64 bit Linux kernel. Panzvimbo iyoyo, kana iwe ukaona "i386 / i486 / i586 / i686", i32 bit kernel.
Kana iwe uchifanira kusarudza kuti ndeipi vhezheni yeUbuntu, Fedora kana chero imwe distro yekurodha pasi, chii chakakosha ndiyo yekutanga yemirairo, nekuti inoratidza kuti kana yako Hardware inotsigira 64 zvishoma.. Iwo wechipiri kuraira unongokuudza iwe kuti ndeipi kernel yawakaisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Ndinoziva sei kuti processor yangu inotsigira makumi matanhatu nemasere?
fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtesther64 Monitor ds_cpl mds
Saka ini ndinomhanya 64-bit masisitimu systems
Pindura kuna Alt_Fred
Mhedzisiro yaunogovana, pane runyorwa rwe "lm", sezvakaratidzwa mune iyo posvo.
Izvi zvinoreva kuti inotevera nguva iwe yaunogona kurodha pasi 64-bit vhezheni yako yaunofarira distro uye isa iyo vhezheni. Izvo zvingave, sekutaura, iyo "yakakurudzirwa" zvichibva pane Hardware yauinayo.
Ndinovimba ndanga ndiri wevamwe rubatsiro.
ok ndakamhanya iyo "grep mireza / proc / cpuinfo" uye ini ndinowana zvinotevera:
fpu vme pse tsc msr PAE mce cx8 apic mtrr PGE mca cmov bhabhadzira PSE36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb RDTSCP CM 3dnowext 3dnow constant_tsc kukwira NONSTOP_TSC extd_apicid pni tarisisa CX16 popcnt lahf_lm SVM extapic cr8_legacy abm SSE4A 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr npt lbrv svm_lock nrip_save
Ndiri kumhanya kubuntu 10.4 uye sezvo ini ndanga ndisinganzwisise izvi ini ndiri mutsva ku linux asi komputa yangu ine amd uye ivo vaive vandiudza kuti amd inotsigira ese ari maviri mavhezheni 32 ne64.
mubvunzo ndewekuti ndinogona here kurodha pasi makumi matanhatu neshanu shanduro? (Ndiri kushandisa 64-bit imwe)
Ehe, kana Laptop yako ikataura kune yekunze AMD, zvinoreva, kuti iwe unogona kuisa chero vhezheni yeiyo 64bit distros
Yakanaka post, ndatenda zvikuru. Ini ndinokuudza kuti mhedzisiro yemutemo wechipiri yakafamba zvakanaka, ndiri kumhanya kernel 64. Asi nemutemo wekutanga ndakawana izvi: unogona here kutsanangura zvinoitika ndapota?
messianico @ barsa-desktop: ~ $ grep mireza / proc / cpuinfo
mireza: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cms patse ht tm pbe syscall nx lm solid_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl dpltesm vm64prm tarisa ps2 est_dpltesm3prm kuongorora pdcm xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
Pindura kuna mesianico
Sezvauri kuona, lm inoonekwa kana uchiita wekutanga kuraira, ipapo unogona, uye muchokwadi iwe unomhanya iyo 64-bit linux. 🙂
Ndanga ndiri pane iyi linux kwevhiki. Vhiki rakasimba "kudzidza" (Ndakaverenga gumi zvakateedzana zvinyorwa pane ino peji, izvo zvakanaka kwazvo!). Ndiri kushamisika kuona kuti maererano neizvi laptop yangu inotsigira 10-bit kernel.
Ini ndinoverenga hupenyu hwangu: Iyo hp530 kubva angangoita makore matanhatu kana masere apfuura, uye ine 6Gb ye RAM. Zviwanikwa zvinopera nekukurumidza uye ndinonetseka nekuti zvinonyanya kupisa. Saka isa Xubuntu 8 distro. Ini ndinogara ndichiona kushandiswa kwecpu neyekuyeuka kuziva zvinoitika, uye dambudziko roga randinaro izvozvi nderekuti pandinomhanyisa mavhidhiyo mu firefox iyo cpu inoenda ku1%. Dhawunorodha vhezheni 12.04 ndosaka ichiti kana uchitora ubuntu:
"Kana iwe uine PC yechikuru ine isingasviki 2GB yekurangarira, sarudza iyo 32-bit kurodha pasi."
Iine Ubuntu 13.10 32-bit ndanga ndichienda kunokwenya (ndinotya nekuda kweUbatana), ini ndawana iyi distro uye parizvino ndiri kufara.
Asi ikozvino ini 'tsvaga' pano kuti ini ndinofanira kuyedza iyo 64-bit (pane xubuntu hongu). Zvinoita here kuti kunyangwe paine yangu chete Gb yegondohwe, iyo cpu inoshanda nenzira yakafanana kana yakasununguka ne x64? Izvo zvakare zvinondishamisa nekuti ini ndinofunga processor yangu ndeye imwechete musimboti. Ah! izvo zvinoonekwa kwandiri muterminal zvakangofanana nezvazvinoita mukutanga kutaura.
Ndatenda zvikuru nebasa rako, shamwari!
Ehe, haufanire kunge uine dambudziko, uye kunyangwe kana usingaone musiyano mukuru maererano nemaumbirwo uye nekumhanyisa mhanyisa, ini ndinovimbisa kuti processor yako icha
Pindura kuna dannlinx
Zvakanaka, pakupedzisira ndakazviedza muchikamu chidiki chandakaita kuti chiedzwe. Iyo tembiricha inoramba yakafanana (55º - 65º). Ichokwadi kuti iyo cpu inoita kunge isingazadze zvakanyanya, nemuenzaniso weYouTube iko zvino wave kutenderera makumi matatu muzana. Nekudaro, iyo inoyamwa ndangariro zhinji zvekuti ndinofunga ndinonamatira nemakumi matatu nemaviri bits. Iye zvino ini ndinongova ne firefox yakavhurika ine mana ma tabo uye ini ndine 30/32 yeiyo gig yegondohwe inogarwa. Ndatenda nemhinduro!
Elm Axayacatl akadaro
Aifanira kuziva iyi data. Kutenda nemirairo.
Pindura kuna Olmo Axayacatl
indira @ indira-GA-VM900M: ~ $ grep mireza / proc / cpuinfo
mireza: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc pebs bts pni dtes64 kuongorora ds_cpl tm2 cid cxxt
unoreva here kuti pc yangu ine makumi matanhatu nemasere? ndiri kumhanya iyo makumi matatu nematatu
Matías Olivera akadaro
Zviri nyore nemutemo we lscpu; mutsetse wechipiri unoratidza kana iyo microprocessor inotsigira chete makumi matatu nemaviri (x32) kana makumi matanhatu nematanhatu (x86_64).
Pindura kuna Matías Olivera
Iwe uri chaizvo chaizvo sekuisa kwaunoita iwe unoziva kare neiyo yapfuura roll
Pindura kuna jose a rodriguez
Maria Teresa akadaro
uyu ndiwo mhedzisiro yangu fpu vme ye pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtespl64 cm sse2 ss ht tm pbe nx lm solid_tsc arch_perfmon mapebs bts aperfmperf pni dtespl3 cm16 kuongorora ds_scxt pni dtesplXNUMX cmXNUMX kuongorora ds_ dtherm
zvakare inotsigira makumi matanhatu neshanu shanduro.
Pindura kuna maria teresa
Ndiri kuvhiringidzika. Zvino ini ndoona kuti mudiwa wangu wekare laputopu iri makumi matanhatu, asi iyo kernel i64 (kana 686 bit).
Ndakagara ndichishandisa 32-bit distros. Kuita kuchaita nani kana ndikaisa 64-bit distro?
Hei, unogona kugadzirisa izvi? Ini ndine mubvunzo mumwe chete
Izvi zvinoenderana nerudzi rwe software iwe yauchazoshandisa musystem, uye huwandu hwe RAM pakombuta, sekutonga kwese, mutsauko uripo pakati pemakumi matatu nematanhatu mabheji anotanga kuoneka mushure me32 Gb ye RAM, kana une zvishoma, Zvinenge zvisingaonekwe, kana zvakawandisa, mutsauko unogona kuitwa kuti uonekwe mumapurogiramu anorema (seboxbox kana imwe pikicha kana vhidhiyo yekugadzirisa chirongwa), tinotarisira kuti inobatsira.
Grep mireza / proc / cpuinfo inoratidzika kwandiri
Pulse Audio Mixer: applet nyowani yekudzora vhoriyamu muGNOME
Yekutanga "yemahara" Blu-Ray encoder yabuda!